Sombintsombim-baovao: Rugby – «Doppel Top 20» | NewsMada
Sombintsombim-baovao: Rugby – «Doppel Top 20»
Hidona ny Savony sy ny Bebaoty
Tontosa ny alahady 21 novambra lasa teo, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ny ampahefa-dalana roa, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakam-pirenena taranja baolina lavalava “Doppel Top 20”. Ekipa roa no efa fantatra fa nahazo ny tapakila hiatrehana ny manasa-dalana dia ny Cosfa (Bebaoty) sy ny STM (Savony).
Raha tsiahivina ny vokatra, nomontsanin’ny Bebaoty, tamin’ny isa mavesatra 57 no ho 9 ny 3FAI Ambalavao Isotry. Lavon’ny Savony tamin’ny isa 28 no ho 23 kosa ny JSTA Ambondrona. Nifandanja ny fihaonana teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, raha nisaraka 15 no ho 15.
Ho any Berlin ny Malagasy
Hotanterahina ny 7 – 11 novambra izao, any Berlin, ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, taranja MMA Gamma. Hanana solontena i Madagasikara, ka tamin’ny alalan’ny fiadiana ny tompondaka nasionaly, natao farany teo, ny nifantenana ny solontena. Mbola eo am-panaovana ny fitsirihana tanteraka ny tomponandraikitra ka ho fantatra tsy ho ela ny anaran’izy ireo.
Hiditra amin’ny fifaninanam-pirenena
Fandaharam-potoana manaraka miandry ny federasion’ny volley ball, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, beach vbolley. Efa vita ny “1er circuit” sy ny “2e circuit”, ka ny “3e circuit” ny hotontosaina manaraka any Toliara, ny 17 hatramin’ny 19 desambra ho avy izao. Lalao farany hamaranana ny taom-pikatrohana 2021, ho an’ny FMVB izany. Ho fantatra tsy ho ela kosa ny tetiandro ho an’ny taona 2022.